Sary hosodoko Van Gogh miaraka amin'ny effets Tilt Shift | Famoronana an-tserasera
Ny fiatraikany "Tilt shift" dia napetaka tamin'ny hosodokon'i Van Gogh
El vokany mihodina na fantatra koa amin'ny hoe diorama effects, izany dia fiheverana na effets optique mazàna tratra nomerika izay novaina ny seho habe amin'ny fiainana mba ho toy ny sary kely. Ity dingana ity dia azo atao amin'ny blur izay ampiharina marindrano eo an-tampon'ny sy any ambanin'ny sary. Mahatratra valiny lehibe izany satria mety ho hitanao tamin'ny sary sasany toa manolotra tranobe sy zavatra toy ny kely na kilalao izy ireo.
Ankehitriny dia asehonay ity vokarin'ny Tilt-shift ity izay nopetahany sary hosodoko tamin'ny vanimpotoana holandey Van Gogh, ary ny tena izy dia mamokatra vokatra izay toa manaitra be amin'ny sanganasa sasany, ahoana no mampiavaka ny sasany amin'ireo singa mamorona azy ireo. Ny vokatr'izany dia tena mampino tokoa satria hitanao amin'ny sary sasany zarainay amin'ity lahatsoratra ity ihany.
Mahagaga ihany koa indraindray toa manolotra effet 3D tratran'ity effet apetraka ity amin'ny sanganasa maromaro, ary raha nieritreritra kely isika fa ity mpanakanto revolisionera lehibe ity tamin'ny fotoan'androny dia afaka nahatratra tamin'ny fitaovana sasany ananantsika ankehitriny toy ny Photoshop na Illustrator.
Ny iray amin'ireo zava-misy azontsika avy amin'ny fanovana Tilt izay ampiharina amin'ny asan'ny mpanao hosodoko holandey dia ny maha-izy azy amin'ny famokarana ny karazana effets rehetra amin'ny loko sy ny fikorotanana. Lehilahy manam-pahaizana iray izay nandany ny fotoanany mba handeha saika ho amin'ny ho avy ary noho ny asany dia mbola gaga ihany isika noho ny hatsaram-panahy lehibe nananany tao an-tsainy mpamorona sy tamin'ny fanomezana ara-teknikan'ny borosiny.
Raha tianao midira amin'ny loko rehetra napetraka tamin'ity vokatra ity azonao atao ny miditra amin'ilay tranonkala antsoina hoe Artcyclopedia. Fotoana lehibe iray hafa koa hahagaga ny olona ambony noho ny vanim-potoana samihafa toa an'i Van Gogh.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny fiatraikany "Tilt shift" dia napetaka tamin'ny hosodokon'i Van Gogh
Kitapo akanjo goavambe toy ny sary sokitra nataon'i Mehmet Ali Uysal